ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မဲ့သော မြန်မာပြည် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မဲ့သော မြန်မာပြည်	19
ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မဲ့သော မြန်မာပြည်
- jackalin jongin
Posted by jackalin jongin on Apr 21, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုတဲ့ လူ့အခွင့် အရေးဟာ ယနေ့အထိ အမည်ခံသက်သက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် ပြောရရင် လုံးဝကိုပဲ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအောက်က လွတ်မြောက်သယောင် ရှိလာခဲ့ပေမယ့် “အာဏာရှင်ဘာသာရေး အစိုးရ”ကတော့ ယခုထက်ထိ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲပါပဲ။
တရားပွဲတစ်ခုလုပ်ကြမည်ဆိုလျှင် သံဃနာယက အကြောင်းကြားရ၊ သာသနာရေးနဲ့ တိုင်းမှူး၊ မြို့နယ်မှူးတွေဆီ သတင်းပို့ရနဲ့ ပြီးတော့ သူတို့ ထောက်ခံချက်မရရင် ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့များ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာတဲ့ ဗျာ။ ဟဲ…ဟဲ ရှက်စရာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်ခံယုံကြည်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေရှိတဲ့ နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေ ဓမ္မကထိကတွေက ဗုဒ္ဓ၏ တရားတွေ ဟောတာပြောတာတောင်မှ ဒီလိုလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဟာ “အာဏာရှင်ဘာသာရေးအစိုးရဆိုတဲ့” သံဃနာယက လက်အောက် ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားဖြစ်စေတာပါပဲ။
ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုးတက်ပြန့်ပွားအောင် လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အပြင် ရှိပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာကိုတောင် စွန့်လွှတ်အောင်၊ စွန့်ခွာအောင် လုပ်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါတွေဟာ အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းလက်ထက်က နိုင်ငံရေးခုတုန်း လုပ်ဖို့ ဓမ္မစက်ထဲကို အာဏာထည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကိုနားမလည်ရှာတဲ့(သို့)အာဏာကို မက်မောတွယ်တာပြီး လာဘ်လာဘဂုဏ်ကိုခုံမင်တဲ့(သို့) ကိုယ့်ရဲ့သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကို မယုံကြည်တဲ့ (သို့) အာဏာရှင်ကို ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်တဲ့ (သို့) ငါအာဏာရှင် ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ အားလုံးကို ကြီးစိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတသိုက်ဟာ မိုက်မိုက် ကန်းကန်းပဲ အာဏာရှင်ရဲ့ လက်အောက်ကို ဝင်ရောက်နေရာယူပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုးတက်အောင်လုပ်သလိုလိုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ ဖျက်ဆီး မိတဲ့ အဖြစ်ရှိနေတာကို ယနေ့ လက်ရှိသံဃနာယက ဘုန်းကြီးတွေအထိ မသိပဲ မသိကြသေးတာလား ဒါမှမဟုတ် သိလျက်နဲ့ ကြောက်ပြီးငြိမ်နေကြတာလား ဒါမှမဟုတ် ဇိမ်ခံနေကြတာလား။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ရင်လေးစရာ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူသားငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေသတွေကိုတော့ လျစ်လျူရှုပြီး အာဏာရှင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခုတုံးလုပ်အသုံးချပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့လျက် လူသားငြိမ်းချမ်းရေးကို စိုးစဉ်းမျှ မဆောင်နိုင်သော ဥပဒေသများကိုတော့ အသက်တမျှ စွန့်လွှတ်စွန့်စား မိုက်မိုက်ကန်း ကန်း လိုက်နာနေကြတာဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ငရဲပဲ။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုး ကွယ် ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာချင်း တူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ သူတပါး၏ ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုကို လုံးဝပိတ်ပင်တားဆီးနှောက်ယှက်ခွင့် မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့တော့ ဒီလိုမဟုတ်။ မြန်မာပြည်မှာ ထေရဝါဒ ဂိုဏ်းကြီးကိုးဂိုဏ်းရှိတယ်။ ထိုဂိုဏ်းကိုးဂိုဏ်းတို့ဟာလည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သင်ကြားတတ်မြောက်ထားပြီး လေ့လာကျင့်ကြံ ကြိုးကုတ်အားထုတ် လို့ရရှိလာတဲ့ ဓမ္မကို ပြန်လည် ဟောပြောညွှန်ပြ ကြပေမယ့် ထိုဟောပြောညွှန်ပြချက်တွေကို ဓမ္မ၊ အဓမ္မ အဆုံးအဖြတ်ပေးကြတာဟာ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ် ခွင့် ဆိုတဲ့ လူသားရဲ့အခွင့်အရေးကို အကြီးအကျယ်နစ်နာထိခိုက်စေတာ ပါပဲ။
အဆိုးဆုံးကိုပြောပါဆိုရင် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ရဲ့ လူသေလူဖြစ်ဝိဝါဒါနုဝါဒဝိနိစ္ဆယပဲ။ ဒါဟာရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)မရှိတော့မှ၊ ပျံလွန်တော်မူတော့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ထို့အတူပဲ ကြောင်ပန်း၊ ကျောက်သင်္ဘော၊ ကျောက်ပုံ၊ မိုးကုတ်၊ မာလာဝရ(ရေတာရှည်)၊ ဓမ္မနီတိ၊ မိုးညှင်း၊ ထူကြီး၊ မိုးပြာ (ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ အာဒိစ္စဝံသ(ဘိက္ခုနောပဒေသ) စသည့်တရားဓမ္မများကိုလည်း အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျပြီး “လုပ်ပါဠိတွေနဲ့(သို့) ဘုရားမဟောသောပါဠိ တွေနဲ့” အဓမ္မဟူ၍ မှားယွင်းစွာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသေး၏။
တကယ်တော့ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ကို အဓမ္မအဖြစ် လုံးဝလုံးဝကိုပဲ လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ သူဟာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ သုံးပါးမြောက် ပကာသနီယကံ အဆောင်ခံထားရသူဖြစ်တယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာမှ အပဖြစ်သော ထိုရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို ယနေ့ သံဃမဟာနာကအနေနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာ့အဆုံးအမမှ လွတ်နေသူကို အဓမ္မအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းဟာ အကြီးအကျယ် အဂတိလိုက်စားပြီး အကြီးကျယ်ဆုံး လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ဖျက်ဆီးရာရောက်ပါတယ်။ သံဃနာယကရဲ့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မြန်မာပြည်ဟာ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရမဟုတ်တော့။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သတိထားမိစေဖို့ပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆိုတာ လူသားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို မဆုံးရှုံးစေပဲ ဆုံးရှုံးရင်တောင်မှ မဆုံးရှုံးအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် အစိုးရပါပဲ။
ယခုလက်ရှိမှာ ဥပဒေတွေဟာ အသက်ဝင်လျက် ကျင့်သုံးလျက် ရှိချင်မှရှိမှာဖြစ်ပေမယ့် နောင်တချိန်ရှိလာခဲ့ရင် သံဃနာယကဟာ ပြာပုံမှာသွားပြီး အိပ်နေရလိမ့်မယ်။ သတိထားပြီး လုပ်ဆောင်ကြ။ သတိထားပြီးမလုပ်ဆောင်ရင် နောင်တကြီးစွာရလိမ့်မယ်။ ကြိုပြီး ပြောလိုက်မယ် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသာ အပီအပြင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင် သံဃမဟာနာယကဟာ အလိုလိုဖရိုဖရဲ ပြိုကွဲသွားကြလိမ့်မယ်။ အဲဒါသတိထားပေတော့ ။
အခုကတည်းက သံဃနာယကရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ကြရင် ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့် မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောလိုက်ပါရစေ။
ရှိ ၊ မရှိ သိလျှင်ပြောကြည့်ကြပါ။
မှတ်ချက်။ ။ စာဖတ်သူများခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ဟာ ဘာသာရေးကို ထိခိုက်စေလိုလို့ မဟုတ်ပေ။ သာသနာထဲကို အာဏာဝင်ရင် သာသနာပျက်တာကို သိစေလိုလို့ပါပဲ။ ။
About jackalin jongin
jackalin jongin has written4post in this blog.
View all posts by jackalin jongin →	Blog
jackalin jongin says: တောလိုက်မှားတဲ့ မုဆိုးဖြစ်လေမလား။ မုဆိုးအငိုက်မိတဲ့ ကျားဖြစ်မလား မပြောတတ်။ ဒီနေရာ ဒီဝန်းကျင်ကို စတင်ပြီးကျက်စားခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော် jackalinjongin ပါ။ မာပါစေသား။
kai says: ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ.. ကမ္ဘာ့ရီပို့ထွက်လာတယ်..
မြန်မာပြည်က.. ထုံးစံအတိုင်း.. ထိပ်မှာချိပ်ဆဲပဲ..
ဘာသာရေးအရ.. အယူအဆအတွေးအခေါ်မတူသူတွေကို.. ဖမ်းဆီးထောင်ချနေဆဲပဲ..။ :?
USCIRF Identifies World’s Worst Religious Freedom Violators March 20, 2012 | by USCIRF
jackalin jongin says: လူသေဖြစ်ဝါဒါနုဝါဒ ဖတ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ပါတယ်။ (စာမှား ပြင်ရန်)
ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် မရှိသေးသ၍ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာတည်နေသေးတယ်ဆိုတာကို
သက်သေပြလို့ရတာပါပဲ။ ဒီမိုကရေဖြစ်နေရင် ပြည်သူရဲ့အာဏာမဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင် ဘာသာရေးလွတ်
လပ်ခွင့်ဟာ အပြည့်အဝရဖို့အတွက်ဆိုိရင် ဘုန်းကြီးတွေဆီမှာ အာဏာမရှိတော့သေချာသလောက်ပဲ။
ဘုန်းကြီးတွေဆီမှာ အာဏာရှိနေသေးသ၍ အူကြောင်ကြောင်ဒီမိုကရေစီပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်ဆိုတာ ပြောလိုက်
moe moe says: ဟုတ်တယ် တရားပွဲလေးတစ်ခု ကျင်းပချင်တာတောင် ဟိုလူကြီးစာတင်ရ ဒီလူကြီးသွားဂါရနဲ့
ဒါလားဟ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်/ဒါလားကွ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ
ရွှေရေစိမ် ဒီမိုကရေစီပါဗျာ !
ashinariya says: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက သူ့ရဲ့ဓမ္မရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် မည်သည့် ရှင်ဘုရင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အာဏာတွေကို မသုံးခဲ့ပါ။
ရိုးသာစွာ သူ့ဓမ္မလမ်းစဉ်အတိုင်းသာ သာသနာပြုခဲ့ပေသည်။
သို့သော် အရှင်ဒေ၀ဒတ်သည် ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းတွေအပေါ်မှာ ခြယ်လှယ်အုပ်ချုပ်လိုတာကြောင့် ရှင်ဘုရင်အဇာသတတ် (အစိုးရ) အာဏာတွေသုံးကာ ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့ပေသည်။
ရှင်ဘုရင်အဇာသတတ်ရဲ့ ဆင်ရိုင်းကြီးဖြင့် နင်းသတ်စေခြင်း၊
ရှင်ဘုရင်အဇာသတတ်ရဲ့ လေးသမားတွေဖြင့် ပစ်သတ်စေခြင်း၊
နောက်ဆုံး သူကိုယ်တိုင် ကျောက်မောင်းဖြင့် လုပ်ကြံခြင်းတို့ကို ပြုခဲ့သည်မှာ
ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းတွေအပေါ်မှာ ခြယ်လှယ်အုပ်ချုပ်လိုသော အာဏာရှင်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတွေအပေါ်မှာ စီမံအုပ်ချုပ်စေတဲ့အခါမှာ ရှင်ဘုရင် (အစိုးရ) အာဏာဖြင့် အတင်းလူဝတ်လဲခိုင်းခြင်း။
လူတစ်ဦး၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၊ ရဟန်းတစ်ပါး ထောင်ထဲရောက်စေသော စေခိုင်မှုမျိုးကို ရှင်ဘုရင် (အစိုးရ) တွေကို အပူမကပ်ခဲ့ပါ။
အလွန်ဆုံးမှ သူ့သာသနာမှ ကျဉ်သော ပကာသနီယကံ ဖြင့်သာ အရေးယူပေသည်။
ထို့ကြောင့် ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်သည့် ဦးဂမ္ဘီရလို ရဟန်းမျိုးကို သူတို့ ပြောဆိုလို့မရတော့လို့ အစိုးရ အာဏာစက်ဖြင့် ကူညီပါဆိုသော လမ်းစဉ်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်လော၊ ရှင်ကြီးဒေ၀ဒတ်လမ်းစဉ်လောဆိုတာကို စိစစ်ဖို့လိုပေပြီ။
(http://mandalaygazette.com/71745/uncategorized-other/copypaste) ရှိ realman ရေး
“သိကြားသာသနာမှ ဘုရားသာသနာသို့” post ကို ဆက်ညွှန်းပေးပါသည်။
mggwa says: ဒါဆိုရင် လက်ရှိ သံဃာတွေအပေါ်မှာ ဆရာကြီးလုပ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတွေက ရှင်ကြီး ဒေ၀ဒတ်ဂိုဏ်းဝင်တွေပေါ့နော်။
ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်သွားနေတဲ့ အစိုးရသစ်ကတော့ အာဏာရူး အဇာသတတ်လို ရှင်ဘုရင် (အစိုးရ)မျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်တန်ရာပါဘူး နော့။
(သာသနာရေးဝန်ကြီးရေ ဒီ မဟနရှင်ကြီးတွေ ခိုင်းတိုင်း လျှောက်လျှောက်ပြီး ညွှန်ကြားလွှာတွေ ထုတ်ထုတ်မနေနဲ့။ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲနဲ့ တော်ကြာ အဇာသတတ်ဂိုဏ်းဝင်ထဲ ပါနေမှာစိုးလို့ပါ။ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့သာသနာကို ဘက်လိုက်မှုမရှိတဲ့ ၀န်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့နော့။)
jackalin jongin says: ကို mggwa ရေ ဒေဝဒတ်နဲ့တော့ နှိုင်းပြီးတော့ မပြောစေချင်ပါဘူးဗျာ။
ယနေ့သံဃာတော် ဆရာတော်တွေက ခေတ်မီပြီး အသိအမြင်ကျယ်ကြတော့ အရိပ်ပြရင် အကောင်ထင်
လောက်ပါတယ်ဗျ။ ဒေဝဒတ်ကတော့ သေသည်အထိကို မိုက်မဲပြသွားတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့
ယနေ့ခေတ်ဆရာတော်သံဃာတွေ အနေနဲ့တော့ အဲသလောက်မိုက်လိမ့်မည်ဟု မယူဆမိလှဘူး။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့ အရသာဟာ တိုင်းပြည်ကို အေးချမ်းစေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့သာ ဒီပို့စ်ကို
ရေးလိုက်ရတာပါ။ နောက်ကြရင်တော့” တိုင်းပြည်မွဲကြောင်း နည်းလမ်းကောင်း” များကို ရေးတင်ဖို့ရှိပါတယ်။
mggwa says: အရိပ်ပြရင်အကောင်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဖြစ်စဉ်ကိုက်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ အရိပ်သဘောမျိုးပြလိုက်တာ အကောင်ကြီးပါမြင်သွားကြရင်တော့ I am very sorry.
siamonone says: သာသနာထဲကို အာဏာဝင်ရင် သာသနာပျက်တာကို သိစေလိုလို့ပါပဲ။ ။
ထို့အတူ အာဏာထဲကို သာသနာဝင်ရင် …. နိုင်ငံပါပျက်နိုင်ပါတယ် .. ။
Ko out of... says: ရဟန်းသံဃာဆိုတာ NGO အဖွဲ့အစည်းဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်…
အခုတော့ အဏာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းနေရတယ် ဆိုတော့…သေချာစဉ်းစားပါ?….အခုတော့ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မတရားသဖြင့် နှိပ်ကွပ်…တဖက်က အင်းအား (၅)သိန်းလောက်
ရှိတဲ့ လူက တစ်ယောက်သောသူကိုကြောက်နေရတယ် ဆိုတာ.. အရေအတွက်ကိုကြောက်တာလား?
အရည်အချင်း ဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုကြောက်တာလား?…သေချာမလေ့လာဘဲ ဘယ်အရာမဆို တစွတ်ထိုး
မလုပ်သင့်ဘူး… မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူး.. အဂတိ တရားကလွတ်ဖို့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဟောကြားပေမဲ့ ..” ပွေးဝဲ ယားနာဆေးကို ငြော်ငြာပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပွေးဝဲယားနာ ” အပြည့်နဲ့ဆိုရင် သင့်သော်ပါ့မလား?…
မလွတ်သေးသမျှတော့.. .. မြန်မာပြည်ဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့.. ယုံကြည်မှာမဟုတ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 118
မိုးချမ်းမြေ့ says: မလွတ်သေးဘူးလို့…ပြောသံကြားတယ်…
AYAN KHA says: ဆရာတော် မလွတ်မြောက်သေးပါဘူးဗျာ…. သံတိုင်နောက်ကွယ်မှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အရိယသစ္စာတရားအတွက် ပေးဆပ်နေရင်း….. လောကမှာ အောင်ပွဲခံနေတာတွေတိုင်းဟာ အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သက်သေထူနေပါတယ်……
ဇောက် ထိုး says: ကွန်မန်းတွေဖတ်ရတာ ကြက်သီးထမိပါတယ်။ မှန်ရာတွေပြောတာလို့လဲခံစားမိ ပါတယ်။ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်ရင် အသုံးမတည့်တော့ရင် ပျောက်သွားရမှာပါ။ အာဖဂန်က အမျိုးသမီး ခေါင်းမြီးခြုံမှု။ အမျိုးသမီးစာမသင်ရမှု။ အိန္ဒိယက လင်သေရင် မယားပါ လိုက်သေရမှု။ ဒါမျိုးတွေဟာ ခေတ်နဲ့လူ့အသိတရားတွေက လက်မခံ ရင် ပျောက်ပျက်သွားရမှာပါ။
Phaung Phaung says: စာရေးသူကို သိစေချင်တာ…..ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ…. ဥပမာ ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္နူ၊ မွတ်စလင် အစရှိသဖြင့် ကွဲပြားတာကိုပြောတာပါ။
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ကို အဓမ္မအဖြစ်သတ်မှတ်တာမလွန်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာမှ … ဘုရားရဲ့ အယူဝါဒ၊
ဘုရားဟောနဲ့မညီတဲ့ ၀ိသေသတွေကိုတော့ အမှန်ယူလို့မရပါဘူး။ ဘုရားဟောနဲ့မညီရင် ဒါ အဓမပါပဲ။
ကြောင်ပန်း၊ ကျောက်သင်္ဘော၊ ကျောက်ပုံ၊ မိုးကုတ်၊ မာလာဝရ(ရေတာရှည်)၊ ဓမ္မနီတိ၊ မိုးညှင်း၊ ထူကြီး၊ မိုးပြာ (ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ အာဒိစ္စဝံသ(ဘိက္ခုနောပဒေသ) စသည့်ဂိုဏ်းတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီး
နေတဲ့ အယူမှားဝါဒတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှားယွင်းနေတဲ့ အယူတွေဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ရဲ့ ဆူးညှောင့်
mggwa says: အဲလို တစ်ဖက်သတ် မပြောရဘူးလေ၊
ထေရ၀ါဒမှာ ကြီးစိုးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ဖွင့်ဆိုမှုတွေနဲ့ မတူတိုင်း
ထေရ၀ါဒနဲ့ ဖွင့်ဆိုမှုမတူသော တရားများလို့သာ ပြောရမှာနော့။
ကိုယ်အသိနဲ့ မတူတိုင်း အဓမ္မဆိုရင် မဟာယာနတွေကလည်း သူတို့ အဖွင့်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ထေရ၀ါဒကိုလည်း အဓမ္မလို့ပြောမှာပေါ့ကွဲ့။
မဟာယာနတွေကလည်း သူတို့ဆီကမှ ဘုရားဟောအစစ်တဲ့။
မြန်မာထေရ၀ါဒတွေက ၆ -ခါတောင် ပြန်ပြင်ထားတာတဲ့၊
သူတို့က လုံးဝလုံးဝ ကို မပြင်ထားဘူးတဲ့။
ကဲ ကိုယ့်လူ . . . ဂလိုဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာဘုန်းကြီးများသည် ဆရာကြီးလိုမျိုး ဟိုရဟန်း အဓမ္မ၊ ဒီရဟန်း အဓမ္မ လုပ်ခွင့် မရှိပါကြောင်း . . . . . . ။
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်ခံယုံကြည်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေရှိတဲ့ နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေ ဓမ္မကထိကတွေက ဗုဒ္ဓ၏ တရားတွေ ဟောတာပြောတာတောင်မှ ဒီလိုလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဟာ “အာဏာရှင်ဘာသာရေးအစိုးရဆိုတဲ့” သံဃနာယက လက်အောက် ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားဖြစ်စေတာပါပဲ။
siamonone says: ကျွန်တော်စဉ်းစား မရတာတစ်ခုရှိပါတယ် .. မိုးပြာဂိုဏ်း က ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းလိုမျိုးမထောင်ဘဲ တခြားခရာစ်ယာန်လိုမျိုးဂိုဏ်း တစ်ခုထောင် လိုက်ရင် ပိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား .. ဒါဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းဥပဒေနဲ့လည်း ငြိစွန်းစရာမရှိတော့ဘူးလေ ..
jackalin jongin says: ဘာသာရေးအတွက် ဥပဒေမဲ့နေသေးကြောင်းကို သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ အောင်ပန်းဥတ္တမ လူချွတ်ခံရတာကိုကြည့်လိုက်ရင် အသိသာချည်း။ ဒါနဲ့ ဘုရားတရားကို လေးစားလိုက်နာတယ်လို့ ပြောရတယ်ရှိသေး။ ခက်ခက်ချည်ရဲ့ဗျာ။ ဘာတရားလဲလို့ မေးရမည့်ပုံ။ ပုံဖော်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကလည်း အယောင်ဆောင် ဟန်ဆောင်ချည်းမှန်း သိသာပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဗျာ ပြည်မြန်မာ အဲ အဲ အဲလေ ပြည်ဗမာ။